တရုတ်လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် non-mydriatic fundus ကင်မရာ FC161 ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ | SDK
လက်ကိုင်အိတ်ဆောင် non-mydriatic fundus ကင်မရာ FC161
၁. ၉ မှတ်ပြုပြင်ခြင်းအနေအထားသည် ၈၅ ဒီဂရီမြင်ကွင်း၏ fundus ဧရိယာကိုဖုံးအုပ်ထားပြီး fundus ၏အရံအစိတ်အပိုင်းများကိုစောစီးစွာထောက်လှမ်းပေးနိုင်သည်။
၄၅ ဒီဂရီမြင်ကွင်း၊ ဗဟိုရန်ပုံငွေပုံတစ်ခုတည်းကိုရိုက်ကူးခြင်းသည် fundus ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်
2. Multi-touch စစ်ဆင်ရေး
၄.၃ လက်မ full-touch LCD screen သည်ပိုမိုအသိဥာဏ်ရှိသောလည်ပတ်မှုအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။
ဆရာဝန်သည် fundus ၏အသေးစိတ်အချက်များကိုစစ်ဆေးရန်အချိန်မရွေးချဲ့နိုင်ပြီးအမှုအားတည်းဖြတ်ရန်နှင့်ကြည့်ရန်ဖန်သားပြင်ကိုအလွယ်တကူလျှောနိုင်သည်။
WIFI ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်၎င်းသည် fundus ပုံကိုကွန်ပျူတာနှင့်တပြိုင်နက်ချိန်ညှိပေးသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Mediview ကိစ္စစီမံခန့်ခွဲမှု software သည် DICOM protocol အပြင်နေရာများနှင့်ဗဟိုဆေးရုံများကိုအဝေးမှဆေးကုသမှုကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
၁.၂ သန်းထိရောက်မှုရှိသော pixel များ၊ fundus ပုံ၏အသေးစိတ်အချက်များသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ၈၅^ ရှုထောင့်မှ fundus ဧရိယာ၌ mydriasis မပါ၊ အသေးငယ်ဆုံးထောက်ခံမှုφ3,0mm အနက်ရောင်အပေါက် ၄.၃ လက်မအပြည့်ထိတွေ့နည်းပညာ Medview ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
၂. Contrast ကို သုံး၍ ရိုးရာလက်ကိုင် fundus ကင်မရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ၊ FC161 သည်လူနာ၏အသေးစားလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော fundus ပုံ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ မရ။ ပုံရိပ်အရည်အသွေးကိုထိထိရောက်ရောက်မြှင့်တင်ပေးပြီးအော်ပရေတာနှင့်လူနာကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုလျှော့ချပါ
၃. ၁၂ မီလီယံထိရောက်မှုရှိသော pixel များ၊ fundus ပုံများ၏အသေးစိတ်အချက်များသည်ပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးအစောဆုံးတွေ့ရှိရသည့်ရောဂါလက္ခဏာများသည်ပိုမိုတိကျသည်။ မျက်ကြည်လွှာရှိဆီးချိုရောဂါ (မျက်ကြည်လွှာပျက်စီးခြင်း၊ ရေတိမ်နှင့် macular ယိုယွင်းခြင်း) ကဲ့သို့သောမြင်လွှာဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ထိရောက်သောရောဂါရှာဖွေမှုအတွက်အသေးစိတ်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမြင့်မားသောပုံရိပ်များလိုအပ်သည်။ Optic disc ကို
ပစ်ဆယ် ၁၂ သန်း
သဘာဝအဖြူရောင် LED & အနီအောက်ရောင်ခြည် LED
၄.၃ လက်မ full touch LCD မျက်နှာပြင်
Micro SD ကဒ်သည် 32G အထိထောက်ပံ့သည်
ဖြစ်ရပ်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကြီးမားသောရုပ်ပုံ၊ ရုပ်ပုံချဲ့ခြင်း၊ ဘယ်နှင့်ညာမျက်လုံးပြသခြင်း
၁၈၆၅၀ အားပြန်သွင်းနိုင်သောဘက်ထရီပမာဏ - ၃၄၀၀ mAh ထုတ်ဗို့
ပါဝါ Adapter \_
5VDC, 2A ဖြစ်သည်
၂၈ စင်တီမီတာ x ၁၃ စင်တီမီတာ x ၁၅ စင်တီမီတာ
Standard Accessories များ
ယခင်: Applanation မျက်ကြည်လွှာဖိအား T170
နောက်တစ်ခု: အမြင်အာရုံ electrophysiology တူရိယာ BIO-2000
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ Slit Lamp
Digital Fundus ကင်မရာ
လက်ကိုင် Fundus ကင်မရာ
Non Mydriatic Fundus ကင်မရာ
Angiography ပါသော Non-Mydriatic Fundus ကင်မရာ
အိတ်ဆောင် Fundus ကင်မရာ
အိတ်ဆောင် Retinal ကင်မရာ